Channel7maker program | Tho Hi
Forever BEC-Tero နှင့ျ MRTV4 တို့သညျ မွနျမာနိုငျငံသို့ TV ပရိုဂရမျအသဈ “တီထှငျသူတို့ ရှှအေိမျမကျ” ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ ဂုဏျယူစှာ မိတျဆကျပေးခငြျပါတယျ။ “တီထှငျသူတို့ ရှှအေိမျမကျ” Program ဟာ ငယျရှယျတဲ့အငျဂငြျနီယာမြားရဲ့တီထှငျမှုနှင့ျရညျမှနျးခကြျကိုမွင့ျတငျစတေယျ။
ကိုယျပိုငျတီထှငျထားသောအရာမြားကို”တီထှငျသူတို့ရှှအေိမျမကျ”အစီအစဉျတှငျလာရောကျပွသနိုငျမှာဖွဈပါတယျ၊ ဒီပရိုဂရမျဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အနယျနယျအရပျရပျက မညျသည့ျ ကိုယျပိုငျဖနျတီးတီထှငျမှုမြိုးကိုမဆို ဖိတျခေါျပါတယျ။ ရှေးခယြျခံရတဲ့ တီထှငျသူတှကေ သူတို့ရဲ့တီထှငျမှုကို ပွသရမှာဖွဈပွီး ဆုငှေ မြားပိုငျဆိုငျခှင့ျရရှိမညျ ဖွဈပါသညျ။
1. တီထှငျသူဟာ အထကျတနျးကြောငျး ၊အသကျမှေးဝမျးကြောငျး၊ တက်ကသိုလျ ၊ ကောလိပျ ကြောငျးသားမြားနှင့ျ အခွားသောအသငျးအဖှဲ့ဝငျမြားမှ တီထှငျဖနျတီးထားခွငျး သို့မဟုတျ မိမိကိုယျပိုငျတီထှငျထားသောမညျသည့ျပစ်စညျးမဆိုလာရောကျပွသနိုငျပါသညျ။
3. လြှောကျလှှာကို တဈဦးခငြျးသောျလညျးကောငျး အဖှဲ့လိုကျသောျလညျးကောငျး (တဈဖှဲ့ လြှငျ လူသုံးဦးထကျမပိုရ)ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသူတို့သညျ မိမိတို့၏တီထှငျဖနျတီးမှုမြားကို ကြောငျး၏ ကိုယျစား ဒါမှမဟုတျ တဈဦးတဈယောကျခငြျး အနဖွေင့ျ မိမိတို့ဆန်ဒရှိသည့ျအလြှောကျ တငျပွနိုငျသညျ။
4. တီထှငျပစ်စညျးမြားသညျ ကိုယျပိုငျစိတျကူးဖွင့ျတီထှငျထားခွငျးဖွဈရမညျ။
လာရောကျယှဉျပွိုငျသူတိုငျးအတှကျ ဆုကွေးငှေ ငါးသောငျး ကပြျခြီးမွှင့ျသှားပါမညျ။ ထို့အပွငျ ၄ငျး၏ idea ကိုအကဲဖွတျမြားမှ နှဈသကျပွီး ဝယျယူခဲ့လြှငျဆုငှေ သုံးသိနျး ခြီးမွှင့ျသှားမှာဖွဈပါသညျ။ မိမိတို့ Program မှ ပစ်စညျးကိုယူထားမညျမဟုတျပါ။
← Firefox ရဲ့ servo အကွောငျး
Top 10 snaps in August →